सबै छ हजुर ? - Worldnews.com
सबै छ हजुर ?
चुनाव लक्षित सुरक्षा व्यवस्था कडा भइरहेका बेला हिजोआज सडकका हरेक गल्लीमा राम्रै चेकिङ भइरहेको धरहरालाई महसुस भएको छ। यसो एउटा सडक गल्ली पार गर्यो अर्को सडक गल्ली आइपुग्दा फेरि चेकिङ हुन्छ। राति–राति काम गरेर घर फर्किनेहरूका लागि यो त खुसीकै कुरा भयो। सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति भएपछि लुटिने चोरिने डर भएन।
धन्य नेपाली खेलाडी ⁄
बेलाबेलामा अनेकौं हर्कत गरेर उपद्रो गरिरहने नेपालीहरू देखेर विगतका दिनदेखि नै धरहरा वाक्कदिक्क भइसकेको छ। आज फेरि नेपालीहरूको एउटा हाँसो उठ्दो उपद्रोको पर्दाफास भएको छ।...
News of Nepal 2017-09-24
सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम गाउँमा दुई लेन सडक
बलेफी–तेम्वाथान सडकको जुगल गाउँपालिका कार्यालय ढाडेदेखि मान्जेसम्मको १६ किलोमिटर सडक चौडा पारेर दुई लेनको बनाइएको छ । सडक दुई लेनको बनाइएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा खुसी भएका...
गल्ती अनुसारको कारबाही हुन आवश्यक: ट्रिपर ब्यवसायी संघ
पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर । दिउँसोको समयमा उपत्यका भित्र ट्रक तथा ट्रिपर गुडाउन निषेध गर्दा व्याबसायी र उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै उपत्यकाका ट्रक, टिप्पर ब्यवसायीहरुले निषेध...
News of Nepal 2018-08-11
कथा -मृत्यु सम्बाद
दिलमान ब्युतियो ! हँ दिलमानको लास ब्युतियो ? ए सुन हौ गाउँले हो दिलमान ब्युतियो ! भर्खर होइन ३ /३ दिन मुर्दा भैसकेको दिलामानाको लास कसरि ब्युतियो ? ओह घोर आश्चर्य के अनर्थ...
Nepali Post 2018-05-06
सार्वजनिक गाडीमा सधैं कष्टकर यात्रा
बिन्दु अधिकारी ढकाल मुलुकको समग्र भागमा हेर्ने हो भने ५ लाखभन्दा बढी यातायातका साधन सञ्चालित छन्। विकासले फड्को मारेसँगै गाउँ–गाउँमा सडकको विस्तार भएको छ। सडक विस्तारसँगै...
News of Nepal 2017-04-02
ज्योति देवकोटा गत साता वासिङ्टन डिसीमा ३१ वर्षका एक नेपाली भाइसँग भेट भयो। अमेरिका पुगेको तीन महिना बितिसक्दा पनि उनी कसैसँग खुलेर कुरा गर्न सकेका छैनन्। १६ महिनासम्म थेगेको ‘तल्लो बाटो’ को डर उनको अनुहारबाट अहिले पनि हट्न सकेको छैन। ‘ट्रम्प प्रशासन’ ले अंगालेको ‘अवैधानिकहरुप्रतिको कडा नीति’ ले अहिले हरेक दिन भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, हाइटीलगायत ल्याटिन मुलुकबाट अमेरिका...
कथा : “अदृष्य पाटो”
असोजको महिना मौसम सफा छ । आकाश खुलेको छ । खुलेको आकाशमा रंगीचंगी चंगाहरू उडिरहेछन् । वर्षायाम भर्खरै सकिएकोले धर्ती पनि उघारो र ओभानो छ । घाम पारिलो छ । दिन घमाईलो छ । मध्यान्हको बेला कौशीमा अलि सियाँल पारेर बेतको आरामदायी कुर्सीमा म बसिरहेछु । केही महिना मात्र भयो कृषी बिकास बैंकबाट अवकाश लिएको । छोरा, बुहारी र नाती-नातिना अमेरिकातिर छन् । उता उनीहरूको बन्दोबस्त राम्रै छ । यो...
खाली खुट्टा काठमाडौँ आईपुगेका तारा बने करोडौंका मालिक !
-अस्मिता खड्का/ काठमाडौँ खाली खुट्टा । धेरै पढ्ने सपना ! त्यो पनि काठमाडौँ शहरमा । कसैको साथ छैन । शरिरमा एक सरो कपडा मात्र । गाउँलेका लागि अञ्जान र विरानो देश । भर्खर, दह्रोसँग खुट्टा टेक्न मात्रै जानेको ११ वर्षीय बालकले देखेका सपना ! यी सबै हाम्रो लागि एकादेशको काल्पनीक कथा जस्तो लाग्छ । तर,विकट गाउँ, काभ्रेपलाञ्चोक कोशी पारी जन्मेका तारा बहादुर कुँवरले आफ्नो सपना पुरा गर्न...
‘२६ वर्षदेखिको यातना, अब सहन्न’
बैशाख १७ गते बुद्ध जयन्तीको दिन । विहान ८ देखि ९ बजेसम्मको एउटा कक्षामा सहभागी भएँ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको उपमेयर भएदेखि शुरु भएको सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा अरु दिन झैं त्यो दिन पनि महिला समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अतिथि भएँ । काका ससुराको घरमा आयोजना भएको पार्टीमा सहभागी भइसके पछि सातदोबाटोमा आयोजित एक कार्यक्रममा नगरपालिकाका मेयरसँगै सहभागी भएँ ।...
घर पुग्नेबित्तिकै मेरो पनि टाउकोबाटै पेट्रोल खन्याए ..तँलाई ‘७ बजे पछि घर आउने अनुमति कसले ...
विहान ८ देखि ९ बजेसम्मको एउटा कक्षामा सहभागी भएँ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको उपमेयर भएदेखि शुरु भएको सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा अरु दिन झैं त्यो दिन पनि महिला समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अतिथि भएँ । काका ससुराको घरमा आयोजना भएको पार्टीमा सहभागी भइसके पछि सातदोबाटोमा आयोजित एक कार्यक्रममा नगरपालिकाका मेयरसँगै सहभागी भएँ । चार वटा कार्यक्रममा सहभागी हुने...